डेटमा लाने पार्टनर भेटेकी छैन– अभिनेत्री छुल्ठिम - Ratopati
डेटमा लाने पार्टनर भेटेकी छैन– अभिनेत्री छुल्ठिम
‘नोभेम्बर रेन’बाट अभिनयमा डेब्यु गरेकी अभिनेत्री छुल्ठिम गुरुङ पहिलो चलचित्रबाटै चर्चामा छाइन् । त्यसपछि केही समय हराएकी उनी ‘डायरी’ नामक चलचित्र निर्माण गरेर देखापरिन् । उक्त चलचित्रको प्रदर्शन मिति जेठ ५ गते जुराइएको छ । चलचित्रमा उनले निर्देशकसमेत रहेकी अभिनेत्री रेखालाई भिलेनको रुपमा देखाउँदैछिन् । चलचित्र डायरीको काममा व्यस्त भइरहँदा उनी केही दिन पहिले घोषणा गरिएको चलचित्र ‘नेप्टे’मा समेत अभिनेत्रीका रुपमा अनुबन्धित भएकी छन् । यो चलचित्रमा उनले अभिनेता दयाहाङसँग रोमान्स गर्नेछिन् । यी नै अभिनेत्री छुल्ठिनसँग रातोपाटीले राखेको दश प्रश्न :
सौन्दर्यप्रति कतिको सचेत हुनुहुन्छ ?
केटी मान्छे भएपछि सौन्दर्यप्रति सचेत नहुने भन्ने कुरै भएन । केटीमान्छे राम्री हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । आफ्नो फेसअनुसार मेकअप गर्नुपर्छ । सबैले एकै किसिमको मेकअप गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता म राख्दिनँ । मलाई स्पेसल तरिकाले मेकअफ गरेर रेडी हुँदा दुई तीन घन्टासम्म लाग्छ । तर सामान्यतया दश पन्ध्र मिनेट ।
शरीरलाई कसरी मेन्टेन गर्ने गर्नुभएको छ ?
पहिले म धेरै मोटी थिएँ । मैले अनेक प्रकारले घटाएँ । अहिले चाहिँ नियमित एक्सरसाइज गर्छु । डाइट ब्यालेन्समा खान्छु । ड्रिङ्स् लिँदिन । जिम जान्छु । जान पाएन भने घरमै वर्कआउट गर्छु ।
फेसनप्रतिको धारणा भन्न मिल्छ ?
समयअनुसार अपडेट हुनुपर्छ । तर आफैलाई अड देखिने गरेर स्टाइलिस भएर हिँड्नु हँुदैन । सिजनअनुसार आफूलाई जे सुहाउँछ । त्यही अनुसार लगाउनुपर्छ । कहाँ जाँदैछु, केका लागि जाँदैछु । त्यहीअनुसारको पहिरन लगाउन मनपर्छ मलाई ।
मनपर्ने सवारी साधान ?
स्कुटी धेरै मनपर्छ । तर काठमाडौँको वातावरण अनुसार स्कुटीमा धेरै यात्रा गर्न सकिन्न ।
मनपर्ने खान ?
मलाई दालभात नै मनपर्छ । रोटी पनि मेरो रुचिको खानेकुरा हो ।
मनपर्ने गायक गायिका पनि होलान् नि ?
त्यस्तो मनपर्ने भन्ने चाहिँ छैन । तर सिनियर गायक गायिकाको कुरा गर्दा मलाई ओम विक्रम विष्ट, गायिका सुक्मित गुरुङका गीतहरु मन पर्छन् ।
मनपर्ने पुरुष नि ?
हामी कलाक्षेत्रमा छौँ । यसक्षेत्रमा रियालटी एउटा हुन्छ । देखाइएको एउटा हुन्छ । यी दुवै बीचको भिन्नता मलाई थाहा छ । चलचित्रमा हेरेर यो मनपर्छ भन्न पनि सकिन्न । पर्सनल्ली मनपर्ने पनि छैनन् । भेटेको पनि छैन ।
मन नपर्ने केटी ?
नखरा देखाउने केटी मन पर्दैन । केटीमा लज्जा, सुन्दरता पनि हुनुपर्छ । नखरा पनि हुनुपर्छ । तर केहीले बढी नखरा गरिरहेको देखिन्छ । त्यस्ता केटी फिटिक्कै मनपर्दैन । म आफू पनि नगरा गर्दिनँ ।
डेटिङ प्लेस कस्तो मनपर्छ ?
डेटिङ गर्ने पार्टनर अहिलेसम्म पाएको छैन । भोलिको दिनमा पार्टनर भयो र जाने मौका मिल्यो भने माथिल्लो मुस्ताङ जान्छु ।
रोजेको व्यक्तिसँग डेटिङको अफर दियो भने ?
म क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँग डेट गर्ने रहर छ । उनी धेरै मनपर्छ ।